Madaxweynaha Galmudug oo sheegay in wajiga labaad ee shirka dhuusamareeb uu ka soo baxi doono heshiis loo dhan yahay. | Dooxo Diaspora Forum - Golaha Qurbo Joogta Dooxa
Home Articles Madaxweynaha Galmudug oo sheegay in wajiga labaad ee shirka dhuusamareeb uu ka...
Madaxweynaha Galmudug oo sheegay in wajiga labaad ee shirka dhuusamareeb uu ka soo baxi doono heshiis loo dhan yahay.
Muqdisho:-Madaxweynaha dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa ka hadlay wejiga labaad ee Shirka Madaxda dowladda Federaalka iyo kuwa maamul Goboleedyada uga furmi doono Magaalada Dhuusamareeb.
Madaxweyne Qoorqoor waxaa uu sheegay in wejiga labaad ee Shirka Dhuusamareeb uu rajeeynayo inuu noqon doono mid Madaxda dowladda Federaalka iyo kuwa maamul Goboleedyada ay heshiis wadajir ah ku gaaraan.
Shacabka Galmudug ayuu tilmaamay Madaxweyne Qoorqoor inay diyaar u yihiin soo dhaweynta Madaxda dowladda Federaalka ee maalmaha soo socda kala tegi doono Dhuusamareeb, si ay uga qeyb galaanka Shirka.